Nagarik News - निर्वाचन मितिबारे राष्ट्रपति परामर्शमा
होमपेज / राजनीति / निर्वाचन मितिबारे राष्ट्रपति परामर्शमा
निर्वाचन मितिबारे राष्ट्रपति परामर्शमा	30 Apr 2013 | 08:22am मङ्गलबार १७ बैशाख, २०७०
काठमाडौं– राष्ट्रपति रामवरण यादवले निर्वाचन मितिबारे परामर्श थालेका छन्। केही दिन गृहनगर बसेर राजधानी फर्केका उनले सोमबार मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई सबै पक्षको सहमतिमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आग्रह गरे। राष्ट्रपति यादवलाई भेट्न अध्यक्ष रेग्मी साँझ र कोइराला बिहान शीतल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपतिले रेग्मीसँग निर्वाचनसम्बद्ध तयारी, दलहरूसँगको छलफलका साथै निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशबारे जानकारी लिएका थिए। 'निर्वाचनको विपक्षमा देखिएका दलसँगको छलफल कहाँ पुग्यो?' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भने, 'वार्ता र छलफललाई तीब्र बनाउनुस्।'राष्ट्रपतिले अध्यादेशसहित सबै विषयमा दलीय सहमति जुटाउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा रेग्मीले सरकारको तर्फबाट प्रयास भइरहेको र निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा छिट्टै सहमतिमा पुग्ने आश्वासन दिएका थिए। रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले भने भेटमा राजनीतिक कुरा नभएको दाबी गरे। 'नियमित तर अनौपचारिक भेट भएकाले राजनीतिक विषयमा कुरा भएन,' उनले भने। यसअघिको भेटमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचनको विरोधमा रहेका दललाई सहमतिमा ल्याउन राष्ट्रपति र प्रमुख चार दलको सहयोग मागेका थिए। राष्ट्रपतिले असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। राष्ट्रपति यादवले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक एवं कांग्रेस सभापति कोइरालासँग पनि निर्वाचनको विरोधमा रहेका दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। 'तपाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक भएपछि निर्वाचनको वातावरण बनाउन के–के प्रयास गर्नुभयो?' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भने, 'विरोधमा रहेका दललाई तत्काल सहमतिमा ल्याई छिटो निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम गर्नुहोस्।'कोइरालाले विरोधमा रहेका दलसँग छलफल थालेको बताएका थिए। निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा पनि छिट्टै सहमतिमा पुग्ने आश्वासन उनले दिएका थिए। राष्ट्रपति यादवले मंगलबार बिहान एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग परामर्श गर्दैछन्। Tweet नागरिकLatest from